လူကုန်ကူးမူ တိုင်ကြားသော်လည်း အရေးယူ မခံရ | AAR - သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန
← တိုင်းရင်းသား မဟာမိတ်များနှင့် ပြည်သူ လူထုများသို့ အသိပေးချက်	ကချင် သွားသည့် ဂီရိဒေသမှ ရခိုင် အလုပ်သမားများ ခေါင်းပုံ ဖြတ်ခံနေရ →	လူကုန်ကူးမူ တိုင်ကြားသော်လည်း အရေးယူ မခံရ	May 26
မေ (၂၆) ရက်၊ ၂၀၁၁ ခုနှစ်။
တောင်ကုတ်မြို့မှ လူကုန်ကုးသူများအား အရေးယူပေးရန် စာရေးသားပြီး နိုင်ငံတော် သမ္မတထိ တိုင်ကြား သော်လည်း ယနေ့ထက်ထိ တစုံတရာ အရေးယူခြင်း မရှိကြောင်း လူ့အခွင့်အရေး လူပ်ရှားသူ လူငယ် တစ်ဦးက ပြောသည်။
တိုင်ကြားသူမှာ တောင်ကုတ်မြို့က ဒေါ်မခင်ဝင်း ဖြစ်ပြီး သူမ ယောင်္ကျား ဖြစ်သူနှင့် သူမ၏ သားသမက် ဖြစ်သူတို့အား လူကုန်ကူးသူများက ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ရောင်းစားခံရပြီးနောက် ထိုသို့ တိုင်ကြားခြင်း ဖြစ်သည်။
” သူမက အစပထမ တောင်ကုတ်ရဲကို တိုင်ကြားပါတယ်။ ရဲက ဘယ်လိုမှ အရေးမယူတဲ့ အတွက် နောက်ပိုင်းမှာ သမ္မတ စာရေးတိုင်ကြားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိတ္တူတွေကိုတော့ လူ့အခွင့်အရေး လူပ်ရှားနေတဲ့ ရှေ့နေတွေဆီလည်း ပို့ပေးထားပါတယ်”ဟု အဆိုပါ လူငယ်မှ ပြောသည်။
လူကုန်ကူးသူ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးမှာ ရဲအဖွဲ့နှင့် နီးစပ်သူ ဖြစ်ပြီး ရဲအဖွဲ့အား ငွေပေးထားနိုင် သဖြင့် ယခုကဲ့သို့ အဖမ်းမခံရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သူက ပြောသည်။
” သူတို့ လင်မယား ဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ဦးဆီက ကျပ် (၆) သိန်းစီ ယူပါတယ်။ ထိုင်းကို ရောက်ရင် အလုပ်ပါရမယ်ဆိုတော့ လူတွေက လိုက်သွားကြပါတယ်။ ထိုင်းကိုရောက်ရင် လူတွေကို ရောင်းစား ပါတယ်။ အခု ရောင်းစား ခံထားရတာက တောင်ကုတ် မြို့နယ် တစ်ခုတည်းက လူပေါင်း (၆၀)ကျော်ရှိနေပြီ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ရမ်းဗြဲဘက်က လူတွေနဲ့ ဆိုရင် (၁၀၀) ကျော်နေပါပြီ။”
ယခုကဲ့သို့ လူကုန်ကူးမူကို သက်သေ အထောက်အထားများနှင့် တကွ တိုင်ကြားသော်လည်း အရေးယူမူ တစုံတရာ မရှိသဖြင့် ယခုအခါ လူကုန်ကူးခံရသူများက ရန်ကုန်ရှိ ရှေ့နေ ဦးအောင်သိန်း အပါအ၀င် တခြား လူမူ အဖွဲ့အစည်းများကိုပါ အဆိုပါ ကိစ္စ ဖြေရှင်း ပေးရန် အကူအညီတောင်းခံ ထားကြောင်း သိရသည်။
Posted on May 26, 2011, in သတင်းကဏ္ဍ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment.	← တိုင်းရင်းသား မဟာမိတ်များနှင့် ပြည်သူ လူထုများသို့ အသိပေးချက်	ကချင် သွားသည့် ဂီရိဒေသမှ ရခိုင် အလုပ်သမားများ ခေါင်းပုံ ဖြတ်ခံနေရ →	Leaveacomment